“Wax wal-wal ah kama qabo in Real Madrid ay naga sareyso Afar dhibcood” – Ernesto Valverde – Gool FM
“Wax wal-wal ah kama qabo in Real Madrid ay naga sareyso Afar dhibcood” – Ernesto Valverde
(Barcelona) 23 Sebt 2019. Tababaraha reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa xaqiijiyay inuusan wax wal-wal ah ka qabin in Real Madrid ay 4 dhibcood kaga sareyso kooxdiisa Barcelona dhanka kala sareynta ee horyaalka La Liga.
Real Madrid ayaa xalay guul muhiim ah kaga soo gaartay kooxda Sevilla garoonkeeda Ramon Sanchez Pizjuan, kaddib markii ay kaga adkaatay 0-1, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Los Blancos ayaa 11 dhibcoon ku fadhisa booska 2-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka La Liga ee dalka Spain, halka kooxda reer Catalonia ee Barcelona ay ku jirto kaalinta 8-aad, iyadoo heysata 7 dhibcood.
Barcelona ayaa isku diyaarineysa kulanka adag ay habeen dambe ee Talaadada ah kula ciyaari doonto Villarreal, kaasoo ka tirsan kulamada 6-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain ee xilli ciyaareedkan, kaddib guuldaradii 2-0 aheyd ee ka soo gaartay kulankii la soo dhaafay ee Granada.
Haddaba Ernesto Valverde ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka habeen dambe wuxuuna ka hadlay dhoowr arrimood ee quseeya kooxdiisa Barcelona wuxuuna yiri:
“Real Madrid waxay naga horeysaa 4 dhibcood miiska kala sareynta horyaalka, taasi marnaba wax wal-wal ah kama qabo”.
Intaas kaddib Ernesto Valverde ayaa la weydiiyay su’aal ku aadaneyn sababta uu kaga saaray Ivan Rakitić liiska xiddigaha Barcelona kulankii lasoo dhaafay ee Granada wuxuuna ku jawaabay.
“Inkastoo uusan ku jirin liiska, haddana waxay la mid tahay ciyaaryahan fadhiya kursiga keydka, waxaan haatan heysanaa ciyaartoy badan oo khadka dhexe ah”.
“Mas’uuliyada xilli kasta waxay dusha ka saaran tahay macalinka, arranta ku saabsan xiddigaha Carles Perez iyo Ansu Fati, kama tagi doonaan kooxda koowaad wakhtigan”.
Kahor kulanka habeen dambe ee Brescia, Maurizio Sarri oo helaya war aan fiicneyn
RASMI: Jurgen Klopp oo ku guuleystay abaal-marinta tababaraha sanadka ee FIFA The Best